Yemahara Vimeo Dhawunirodha - Sevha Vimeo mavhidhiyo ane mashoma mashoma
Uri kushandisa shanduro yekare. Dzvanya apa kuti uise iyi yazvino vhezheni 4.2.2
Yemahara Vimeo Downloader
❝Sevha mavhidhiyo eVimeo nekudzvanya mashoma❞
➶ Ino saiti inokubvumira kurodha chero mavhidhiyo eVimeo nekupinda muvhidhiyo URL.
Kopa iyi URL yevhidhiyo uye uiise mubhokisi riri pamusoro, ipapo Vimeo downloader inowana iyo vhidhiyo ipapo. Kurudyi tinya pakodha yekuburitsa uye chengeta Vimeo mavhidhiyo kune yemuno disk.
Nyore Vimeo Downloader
Kuwedzerwa uku kunotendera iwe kuti utore pasi vhidhiyo kubva kuVimeo nekupukuta tora mabhatani zvakananga muVimeo player. ➥ Isa izvozvi
Batsira iwe kutora vhidhiyo yakavanzika paVimeo uye rekodhi rarama nhepfenyuro vhidhiyo. Tsigira mazhinji mawebhusaiti. ➥ Isa izvozvi
➥ Isa izvozvi
Zvakanakira Izvi Vimeo Vhidhiyo Download Tool
Dhawunirodha huwandu husina muganho weVimeo mavhidhiyo kubva kuPlaylists, Channels, Likes, Tarisa gare gare, Unganidzo.
☀ Chishandiso chedu kuburitsa Vimeo mabhaisikopo chinogona kuita kuti vhidhiyo yacho ichengeteke, nekukubvumira iwe kuiendesa kune akawanda mishini pasina kudiwa kwekuwana internet.
☀ Inobvisa maawa asingagumi ekubhurwa uye kurodha! Unogona kudhawunirodha vhidhiyo uye kuona bhaisikopo pasina kukanganisa (unobvumidzwa kumbomira uye utore zvekudya).
☀ Unogona kuendesa zvakare mavhidhiyo, mabhaisikopo uye mashowa eTV kakawanda sezvaunoda.
☀ Yakawanda yenguva nguva episodhi kubva kuTV mashandisirwo anobviswa kubva kuseva. Kana iwe uchirodha chikamu ichi chisati chabviswa kubva kuseva, chinova chikamu chemuunganidzwa wako.
Vimeo ndiyo yakanakisa saiti yekusununguka kutarisa, kugovana uye kurodha HD mavhidhiyo. Iwe unogona kuwana zvinhu zvinokufadza kuburikidza nekutarisa mapoka uye chiteshi. Mushure mekutora Vimeo Plus kana Pro account, unogona kunakidzwa nebasa riri nani uye mamwe mabhenefiti.
Vhidhiyo Downloader yeVimeo
Dhawunirodha mavhidhiyo acho nekukurumidza nematanho ari nyore uye ari nyore pasina kunyoreswa kana kuvhura account kubva pamhepo vhidhiyo downloader uye chengetedza iwo mavhidhiyo ekuzotarisa mumashure kana zvimwe zvinangwa.
Dhawunirodha yakakwira tsanangudzo Vimeo vhidhiyo
Mushure mekurodha mavhidhiyo kubva kuVimeo pamhepo, vatambe kuti vatarise mhando yevhidhiyo. Unogona kuzorora uchivimbisa kuti mavhidhiyo anotorwa ane iwo humwe hunhu pamwe neepakutanga epamhepo.
Tsvaga ako mavhidhiyo aunofarira
Nyora mazwi akakosha mubhari yekutsvaga, inoenderana Vimeo vhidhiyo icharatidza kumusoro. Sevha yako yaunofarira mavhidhiyo eVimeo ekushandisa zvisingaitwi neizvi zvishandiso zviri nyore.
Yakachengeteka zvakakwana uye yakasununguka kushandisa
Iwe hausi kuzobvunzwa kubhadhara mari, kusaina kana kuisa imwe chirongwa. Hapana popup, hapana hutachiona, nzvimbo yacho yakachena zvakakwana.
Shandai mushe mune chero browser
Vimeo Downloader inoshanda zvakanaka muGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser uye chero webhu vanobhurawuza. Mukuwedzera, inoenderana chaizvo neMac system inoshanda.
Nzira yekuodha sei mavhidhiyo eVimeo
Vimeo inonyanyo kuzivikanwa vhidhiyo yepasirose yekutambira, yakagadzirirwa vanhu vekugadzira. Vanhu vanogona kuisa, kugovera uye kutarisa mavhidhiyo. Iye zvino, zviri nyore nyore kutora mavhidhiyo kubva kuVimeo uye sarudza chako chaunofarira HD uye SD mhando ne vimeo downloader! Iwe unogona zvakare kuchengetedza Vimeo vhidhiyo kune mp4 kana mp3 file faira. Ingo tevera nhanho idzi pazasi uye ugadzire yako yekuunganidza pasiri pamhepo.
Vhura iyi webhusaiti
Pinda Vimeo vhidhiyo URL uye tinya Bhatani reodha.
Iwe uchaona rondedzero yezvose zvinowanikwa zviripo.
Sarudza mafomati uye mhando uye unakirwe nemavhidhiyo ekunze!
Vanopfuura mamirioni makumi manomwe vanhu vanosarudza kuisa kumusoro-tsanangudzo mavhidhiyo paVimeo kuitira kuti vagovane nenyika. Kana iwe uri fan wakakura weVimeo, Vimeo Vhidhiyo Downloader inogona kuva yako sarudzo yakanaka yekurodha mafirimu ayo mafirimu nemafirimu online. Iyi inotora downloader inoita kuti iwe ugone kuchengetedza chero vhidhiyo kubva kuVimeo kusvika MP4 mumhando yepamusoro senge 720p, 1080p, 2K, 4K. Sarudzo dzese dzinoenderana zvachose nezvaunoda. Ehe, chepamusoro mhando ndiyo sarudzo iri nani. Chii zvakare, zvese zvekuburitsa masevhisi eodha iyi ndeye 100% yemahara. Ngatiedzei
Ma URLs Anotsigirwa
Tsvaga Mibvunzo Newe Mhinduro Pano - Sei kurodha pasi kana kuchengetedza vhidhiyo yeVimeo pakombuta yako?
+ Chii chinonzi Vimeo Vhidhiyo Downloader?
Vimeo Vhidhiyo Inotakurisa chinhu pamhepo yekushandisa kutora mavhidhiyo kubva ku vimeo zvakananga pakombuta yako. Uchishandisa Vimeo vhidhiyo downloader iwe unogona kutora chero vimeo vhidhiyo mune yepamusoro mhando MP4 fomati. Yedu downloader inoburitsa vimeo vhidhiyo viungo uye ipapo unogona kukopa vhidhiyo zvakananga. Zviri nyore kushandisa uye zvachose akasununguka.
+ Vimeo Vhidhiyo Downloader inoshanda pane mobile here?
Chishandiso chedu chishandiso chakaburitswa pawebhu, icho hachiganhurirwe kumatafura chete. Vanhu vanokwanisa kushandisa chero browser yavanoda, chero sisitimu yekushandisa kana chishandiso kuti ichiwane, kusanganisira nharembozha zvakare.
+ Mavhidhiyo angu anoendepi kana achinge aongororwa?
Iwo mavhidhiyo uye mafirimu anotorwa pasi kuburikidza mudziyo wedu anoenda mune chero danda raunenge waisa senge yako yekupedzisira dhafaira. Unogona kufambisa fotera kune chero drive yaunoona yaikodzera.
+ Ko chishandiso chinochengetedza here kopi yefaira randinotora ini?
Vimeo Downloader haichengete kopi yekurodha kwako pamaseva ayo.
+ Inguva yakadii ini kuti ndichengete yangu yakanyorwa zvinyorwa?
Paunenge uchinge watora pasi muvhi kana chidimbu kune chako kifaa, ndechako kuchengeta. Unogona kuitarisa kakawanda sezvaunoda pasina chero kushambadzira kwekushambadzira kana kubhururuka. Iko hakuna muganho kune nhamba yenguva iwe yaunogona kuzvitarisa.
+ Kuchave nekushambadzira mune iyo faira yakatorwa?
Ziva shuwa kuti hakuzove neadware kana malware mufaira rakatorwa. Maseva edu akachengeteka, uye tinopfuudza pasi rakachengeteka bhatani kune vashandisi vedu.
+ Ndinogona kugoverana mafirimu nevamwe here?
Ehe, ichocho ndechimwe chezvinhu zvakanakisa nezveVimeo Downloader yedu yekurodha Vimeo vhidhiyo, iwo mavhidhiyo aunotora iwe anogona kugoverwa kune mamwe madhivhisi uye nevamwe vanhu.
+ Unowana sei Vimeo vhidhiyo Chinongedzo pane Android kana Iphone, Ipad?
Kana uchishandisa browser, Bata uye Bata pane vhidhiyo, sarudza Copy (kana yakapetwa kopi ikoni) mune iyo menyu inoputika. Kana tora uye ubate pane browser kero bar, mune menyu tap Sarudza Zvese kana icon yayo, uye tinya Copy kana icon yayo.
Kana uchishandisa vimeo app, tsvaga kuDhivha bhatani, tora iyo, yakagovana Menyu Meseji nevanhu, maemail uye nzira dzekare dzinoratidza, tsvaga Copy To Clipboard sarudzo uye tap iyo. Wobva wadzokera kubhurawuza uye woita kubva uko ...
+ Nzira yekuDhaunirodha Vimeo Vhidhiyo Pamhepo pane yako mobile?
⓵ Vhura Vimeo
Tanga bhurawuza rako rekufambisa uye uwane iyo webhusaiti yepamutemo yeVimeo kana kuvhura Vimeo application pane yako smartphone. Vhura Vimeo vhidhiyo yesarudzo yako uye ukope iyo URL kero nemazvo.
⓶ Pasika Vimeo vhidhiyo ye URL
Iye zvino famba kuenda kuFBION webhusaiti uye uise iyo kero mune yedu Vimeo Vhidhiyo Downloader. Zvino, tinya pane yekutanga download kuti utore kurodha pasi.
⓷ Sarudza mhando yevhidhiyo
Mushure mekusarudza mhando yevhidhiyo uye tap pa Kurodha bhatani, vhidhiyo tariswa mumaminitsi mashoma zvichienderana nehukuru hwefaira rauri kurodha.
⓸ Zvitarise gare gare pane yako Android / iOS
Tora vhidhiyo yeVimeo yako kubva pachikamu chekurodha chako uye unakirwe kurodha Vimeo vhidhiyo pasina kudiwa kweinternet.
Nzira yekuodha sei vhidhiyo yeVimeo kuna iPhone?
Ndinoita sei download Vimeo vhidhiyo kune yangu foni?
+ Nei vhidhiyo yangu inoratidza sedhiyo? Mufananidzo uripiko?
Enderera mberi, tora iyo! Iyo ichiri vhidhiyo! Asi Browser yako yeInternet haigone kuona izvo, saka inomiririra vhidhiyo seyakanzwika ...
Munoona, dambudziko nderekuti Vimeo dzimwe nguva inopa vhidhiyo mune HEVC fomati, iyo yakawanda yebrowser (kusanganisira chrome uye firefox) haigoni kutamba. Sezvineiwo, Safari chete ndiyo inogona kutamba iyi vhidhiyo mushe.
Zvisinei, kunyange iyo bhurawuza haigoni kutamba iyi faira sevhidhiyo, yako yakajairika inoridza vhidhiyo seVLC kana KMP haingave nematambudziko pakuita izvozvo. HEVC fomati inochengetedza zvishoma pane data saizi pasina kurasikirwa kwemhando, inofungidzirwa kuti inokwanisa sucessor yazvino inoshandiswa zvakanyanya AVC fomati asi izere mune ramangwana.
Saka ikozvino ikozvino vimba neni, tora iyo vhidhiyo faira uye edza kuiridza pane yako kifaa, ichaita zvakanaka, iwe uchaona. Kana iwe usiri kunditenda, isa Safari, mhanya vimeo link, uye uone kuti Safari inoridza sei vhidhiyo iyo Chrome kana Firefox isingakwanise. Sezvineiwo, pano zvinoratidzwa kuti chete Safari, IE uye Edge vanogona kutamba HEVC vhidhiyo chimiro.
+ Zvakadiniko kana vhidhiyo isina kurodha asi yotanga kutenderera pachinzvimbo?
Kurudyi penya pavhidhiyo uye sarudza Chengetedza Vhidhiyo / link Sa; yenhare, Tora uye Bata pane vhidhiyo, sarudza Chengetedza Link apo menyu pops kumusoro.
Kana iwe uri pane imwe yeaya manyowani Apple zvishandiso seMacOS, kana IOS ine iPhones nePads, zvakanaka, usatipe mhosva, ndiApple inorambidza chero yakajairwa mp3 nemavhidhiyo kurodha nemabhurawuza, kuyedza kuti iTunes ive pakati pazvose. Uye iwe unoda nyanzvi dzesoftware kana mabhurawuza ayo anotendera kukodha faira kunyangwe zvinopesana nezvido zveApple.
+ Ndingaite seiko kurodha yakasarudzika yega Vimeo vhidhiyo?
Sezvo vhidhiyo yeVimeo yakazvimiririra yakavakirwa pane RTMP protocol, chete Safari inotsigira kurodha rudzi urwu rwevhidhiyo. Kana iwe uchida kudhanilodha mamwe mavhidhiyo kubva kuVimeo, unogona kushandisa mubatsiri kudhanilodha.
Mibvunzo yakafanana: Ndokwanisa here kurodha vidiyo yakavanzika paVimeo?
+ Vimeo Vhidhiyo Downloader inoshanda sei?
Inoshanda nekuwana iyo link kuburikidza nemashini edu pachena pasina chero mushandisi log-in, uye kana vhidhiyo isiri kuwanikwa kune veruzhinji, haigone kuridzwa. Sezvo ichiona kuti vhidhiyo iripo uye inogona kuridzwa, inotora hunhu hupi huripo kuti utore pasi uye inoratidza mushandisi sarudzo yekusarudza iyo sarudzo yavanoda kuodha.
+ Sei kurodha Vimeo mavhidhiyo kuti uone kushambadzira?
Unogona kutarisa mavhidhiyo eVimeo asiri pamhepo?
Kana kudhanilodha kuripo kwevhidhiyo iyi, uchaona bhatani pasi petsanangudzo yevhidhiyo iyo inoti Rodha. Dzvanya bhatani iri rekukodha uye vhidhiyo yacho ichatanga kurodha pane komputa yako uye unakirwe nemavhidhiyo zvisina basa.
+ Vimeo ndeye mahara here?
Vimeo inopa ina yenhengo sarudzo: Uyezve, PRO, uye Bhizinesi, Premium. Ivo mumwe nemumwe ane zviyero zvakasiyana zvekuchengetedza uye kutsigira sezvaungaona mune chati pazasi. Vimeo inopa yekutanga, yemahara nhengo, asi inokuganhurira ku500MB yakanyanya kuchengetwa pasvondo.
+ Ndingaite sei download mavhidhiyo kubva kuVimeo?
Kopa URL yevhidhiyo iwe yaunoda kudhawunirodha, uye ibike iyo mubhagi kumusoro. Wobva wadzvanya Bhatani bhatani kurudyi kweiyo bha. Icharemera kwemasekondi mashoma, ipapo iwe unenge uine sarudzo yekurodha vhidhiyo muFlV (Flash), MP4, kana WebM fomati.
+ Ndingaite sei download Vimeo mavhidhiyo emahara?
Ndekupi kwandingaburitsa mafirimu emahara?
Vhura webhusaiti yeFBION, isa URL yeVimeo vhidhiyo uye tinya bhatani rekuodha. Iwe uchaona rondedzero yezvose zvinowanikwa zviripo. Sarudza chimiro uye mhando, uye unakirwe nemavhidhiyo kunze kwenyika!
+ Unogona kudhawunirodha Vimeo pane zvinodiwa?
Nepo iwe usingakwanise kurodha Vimeo mavhidhiyo ari kuwanikwa kuti atenge kana kubvarura mune On Demand chikamu chesaiti, unogona kukopa mavhidhiyo akasununguka kuti utarise. Iwe haufanirwi ku account kuti uone mavhidhiyo, zvisinei, kana uine Plus kana PRO Vimeo account iwe unozogona kurodha mafaira enowanikwa kana achiwanikwa.
+ Ndingaite sei kuti ndikwanise kurodha paVimeo?
Uyezve, Pro, Bhizinesi, uye nhengo dzePrimum vane sarudzo yekugonesa mavhidhiyo avo ekutora. Kana iwe uine Unhu hwekutanga uye kusimudzira yako account, iyo sarudzo yekukopa ekurodha ichavhurwa pachayo.
Kuwanika kwemavhidhiyo ekurodha kunoenderana nemunyorero weiyo musiki wevhidhiyo. Nhengo dzepakutanga haikwanise kuita kuti mavhidhiyo awo atorwe; zvisinei, kana vhidhiyo iri yeyenhengo yekuwedzera, Pro, kana Bhizinesi nhengo, ivo vane sarudzo yekutendeuka pane yekurodha sarudzo.
+ Marii Vimeo inodhura?
Nhengo yeVimeo Plus, iyo inomhanyisa kuchengetedza zvishoma kubva kuKusimba, inodhura vashandisi $ 7 / mwedzi, izvo zvisiri zvakanyanya kurova kune chikwama chako. Nekudaro, iyo nhengo yePR inotakura wallop, kunyangwe iine yakawanda yekuchengetedza uye yakazara HD yekutamba, pa $ 20 / mwedzi kweanosvika 1TB / gore kana $ 34 / mwedzi kweanosvika 3TB.
+ Yakawanda sei Vimeo pane zvinodiwa?
Joinha Vimeo PRO pamadhora makumi maviri chete / mwedzi unobhadharwa pagore kutanga kutengesa. Edza iyo njodzi-yemahara kwemazuva makumi matatu. Tora kumba 90% yemari yacho mushure mekutengesa mutengo. Sarudza rendi, tenga, kana kunyorera, uye isa mutengo wako wega.
+ Sei kusarudza Vimeo vhidhiyo downloader yeMac?
+ Unochengetedza sei mavhidhiyo eVimeo kuimba yako yekutandarira?
Mushure mekunge vhidhiyo yacho yatorwa, dhonza faira revhidhiyo kubva kuodha Downloads pane komputa yako mu iTunes kana chimwe chigadzirwa chinenge Android kana iPhone. Iye zvino Vimeo vhidhiyo ichaponeswa mune yako yemahara gallery.
Yakanakisa online basa rekutora vhidhiyo kubva kuVimeo yemahara.
7 vashandisi ratirwa
Iine chishandiso ichi, risingaperi Vimeo vhidhiyo zviwanikwa zvave pedyo. Zvese zvaunoda kuti uite kukopa Vimeo vhidhiyo URL kero, isa munzvimbo yakasarudzwa uye tinya Dhawunirodha. Munguva pfupi chete, Vimeo downloader ichaita auto-vhidhiyo yacho uye kukuwanisa yekurodha maonline. Iwe unoona, zviri nyore kwazvo kusununguka kutora Vimeo vhidhiyo.
Iyo saiti inondipa yakakwana mhinduro yekuodha mavhidhiyo kubva kuVimeo online. Ingoisa iyo vhidhiyo URL uye tinya Dhawunirodha. Zvadaro, zvese zvinofamba mushe. Zvino shamisa.
Advisor wezvemari, Fort Walton Beach
Iyi ndiyo yakanakisa Vimeo Downloader yandakamboshandisa. Pasina kudzika, ndinogona kusevha mavhidhiyo angu ese andinofarira ku komputa. Ndinokutendai nebasa renyu rakakura!
Computer Rutsigiro Nyanzvi, Old Saybrook
Kurodha pasi mavhidhiyo hakuna kumbobvira kwakave nyore zvakadaro pasina kunyoresa chero kwaunogona kutora Vimeo vhidhiyo. Ini ndinoshamiswa nekuti vhidhiyo yandinofarira inodakurwa muzvidimbu zvemaminitsi.
Nguva pfupi yadarika ini ndakaburitsa vhidhiyo yeVimeo yakakura uye inotorwa mukati memaminetsi mashoma. Ndiri kushamisika chaizvo nekumhanya kwayo kunoshamisa. Izvi zvakakwana Vimeo Vhidhiyo Downloader.
Software Software, Chattanooga
Vimeo Vhidhiyo Inotakurisa chishandiso chakanaka uye inoita zvayakavimbisa. Ichi chimwe chishandiso chakanakisa kutora Vimeo Vhidhiyo. Ndinoda kukurudzira chida ichi kune wese munhu!
Ndiri kunyatso fadzwa naVimeo Vhidhiyo Downloader. Muchokwadi, ndeyekutsvaira zvachose uye zviri nani kupfuura mamwe ma downloaders anowanikwa pane internet.
Network Nyanzvi, Greenland
Izvi ndizvo chaizvo zvakanaka! Hapana anodikanwa ekuodha. Ingo kukopa uye unamate URL uye iwe uchawana iwo Vimeo mavhidhiyo munguva. Uye mamwe mapeji evhidhiyo anozivikanwa anotsigirwa chaizvo. Chiitiko chikuru kwandiri uye hapana chakanetsa zvekare!
Nyanzvi yemasvomhu, Paris
Icho chikuru chemahara chigadzirwa! Inofanirwa kunge iri sarudzo kune vanhu vangada kuona online mavhidhiyo ekunze vasiri pamhepo kuenda kana kungozoona mushure. Easy kushandisa, akachengeteka uye chaizvo akaitwa mukuodha mavhidhiyo!
Dhawunirodha mavhidhiyo eVimeo muMP4 pamhando yepamusoro 2021